မြောင်လူမျိုး - ဝီကီပီးဒီးယား
မြောင် သည် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းမှ လူမျိုးစုဖြစ်ပြီး တရားဝင်မျိုးနွယ်စု ၅၆ မျိုး အနက်မှတစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု တရုတ်အစိုးရ မှအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ မြောင်သည် တရုတ်စကားလုံးဖြစ်ပြီး အခြားသော မုံ၊ မှူ၊ ကျိုးရှုံ စာလုံးများအတွက် ကိုယ်ပိုင်စာလုံးပေါင်းပုံစံရှိသည်။
ရှည်လျားသည့် ချို - ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည့် မြောင်အမျိုးသမီးခေါင်းပေါင်း—one of the small branches of Miao living in the 12 villages near Zhijin County, Guizhou
မုံဘာသာစကား, မန်ဒရင်းဘာသာစကား, ကွန်တန်ဘာသာစကား, ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား, တိုင်မျိုးနွယ် (လာအိုဘာသာစကား နှင့် ထိုင်း ဘာသာစကား), ပြင်သစ်ဘာသာ
Miao folk religion. Minorities: Taoism, Atheism, Irreligion, ခရစ်ယာန်ဘာသာ, ဗုဒ္ဓဘာသာ
"မြောင်" အုပ်စုတွင်အဆိုပါမတူညီသောလူမျိုးသေချာပေါက်ဖြစ်စေမည်အကြောင်း အသံ အများစု၏အင်္ဂါဖြစ်ကြောင်းကိုသော်လည်း, ဒါမှမဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆက်စပ်သော Miao-Yao အဘိဓာန် အဆိုပါပါဝင်သောဘာသာစကားမိသားစု, အဘိဓာန် Hmong, Hmub, Xong နှင့် A-Hmao နှင့်အများစုရှယ်ယာယဉ်ကျေးမှုတူညီပြုပါ ။ Miao အုပ်စုတော်တော်များများသည်သူတို့၏မိခင်ဘာသာစကားဖြင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးရှိသည်။ Miao ဟုသတ်မှတ်ထားသောအဖွဲ့များသည်၎င်းတို့သည်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဖြစ်ကြောင်းပင်သဘောမတူကြပေ။ သို့သော် Hmong ကဲ့သို့သော Miao အုပ်စုများသည်စုပေါင်းအုပ်စုတစ်ခုတည်းဖြစ်သော Miao ကိုသဘောတူကြသည်။
မြောင်လူမျိုးများသည် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ကွေ့ကျိုး ၊ ယူနန်, စီချွမ်, ဟူပေး, ဟူနန်n, ကွမ်ရှီ, Guangdong နှင့် ဟိုင်နန်ပြည်နယ်များတွင်အဓိကအားဖြင့်နေထိုင်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် မြောင်မျိုးနွယ်အုပ်စုများတွင် မုံလူမျိုးများသည် တရုတ်ပြည်မှအရှေ့တောင်အာရှ ( မြန်မာ (မြန်မာ)၊ ဗီယက်နမ် မြောက်ပိုင်း၊ လာအို နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ) သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် လာအိုကွန်မြူနစ်များသိမ်းပိုက်ပြီးနောက် မုံဒုက္ခသည်အမြောက်အမြား သည်အမေရိကန် ၊ ပြင်သစ် နှင့် ဩစတြေးလျ နိုင်ငံများရှိအနောက်နိုင်ငံများတွင်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
၁ အမည်ရောနှောနေသည်: မြောင် သို့မဟုတ် မုံ လူမျိုး
၂ လူဦး ရေ
၆.၁ မြောင်ငါး (苗鱼miáoyǘ)
အမည်ရောနှောနေသည်: မြောင် သို့မဟုတ် မုံ လူမျိုးပြင်ဆင်
Guizhou ၊ လန်ဒေအ် မြောင်တိုင်းရင်းသားကျေးရွာမှ မြောင်ဂီတသမားများ။
Guizhou မှ လန်ဒေအ်ရွာမှ မြောင်မိန်းကလေးများသည် ဖျော်ဖြေရန်အလှည့်ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ မိန်းကလေးများသည်ဖျော်ဖြေရန်အလှည့်ကိုစောင့်နေကြသည်။
မြောင် ဟူသောဝေါဟာရသည် ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် တရုတ်အနောက်တောင်ပိုင်းရှိ ဘာသာဗေဒနှင့်ဆက်စပ်သောလူနည်းစုလူမျိုးစုအုပ်စုတစ်စုပါဝင်သည့် မင်ကျု (တိုင်းရင်းသားအုပ်စု) အဖြစ်တရားဝင်အဆင့်အတန်းရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအုပ်ချုပ်ရေးဌာနများ တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရများမှကိုယ်စားလှယ်များအတွက်အမတ်နေရာများခွဲဝေပေးခြင်းအပါအ ၀ င်လူနည်းစုအုပ်စုများကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏အခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းလင်းရန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ပိုမိုကြီးမားသောအားထုတ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ 
သမိုင်းကြောင်းအရ Miao ဟူသောဝေါဟာရသည်ဟန်လူမျိုးမဟုတ်သောလူအမျိုးမျိုးနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောအသုံးအနှုန်းများဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းတရုတ်အခြေစိုက်အမည်များသည်အမျိုးမျိုးသောမှတ်တမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ Miao, Miao-tse, Miao-tsze, Meau, Meo, mo, Miao-tseu စသည် အရှေ့တောင်အာရှအခင်းအကျင်းတွင်တရုတ် "Miao" မှဆင်းသက်လာသောစကားလုံးများသည်ထိုဒေသတွင်နေထိုင်သောလူမျိုးကွဲများကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချသည့်သဘောသက်ရောက်ခဲ့သည်။ မင်မင်းဆက် (၁၃၆၈-၁၆၄၄) တွင်ထိုဝေါဟာရကိုပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးထိုအချိန်ကယင်းကို "ရိုင်းစိုင်းတဲ့" ဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။ Nanman ၏ကွဲပြားမှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မပတ်သက်သောတရုတ်တောင်ပိုင်းရှိဌာနေတိုင်းရင်းသားများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းအကျွမ်းတဝင်မရှိသော (g Sheng) နှင့်အကျွမ်းတဝင် (u Shu) Miao ကိုညွှန်းဆိုခြင်းမှာအုပ်စုနှစ်စု၏ဝါသနာတူမှုနှင့်နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ကိုရည်ညွှန်း။ ၎င်းတို့အားခွဲခြားရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အဆိုပါ Qing မင်းဆက် (1644-1911) သည်အထိပိုမိုထုစပါးခွဲခြားအရေးအသားပေါ်လာပါဘူး။ ထိုအချိန်တွင်ပင်၊ မည်သည့်လူမျိုးစုအမျိုးအစားခွဲခြားမှုတွင်ပါဝင်သည်ကိုပိုင်းခြားသိမြင်ခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ နိုင်ငံရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆန့်ကျင်သောမုံလူမျိုးများ၏သမိုင်းကြောင်းအရ Miao လူမျိုးစုများကိုဟောင်ဟူသောဝေါဟာရအရပေါင်းစည်းလိုက်ခြင်းကြောင့် Miao ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်ယုတ်ညံ့သောအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်မျက်မှောက်ခေတ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်မူမိုအိုပြည်သူများနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုအသုံးအနှုန်းကိုဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ 
ယူနန်ပြည်နယ် ၊ ယွင်ယန်ခရိုင်၊ လွမ်မန်ကျေးရွာမှ ဈေးဝယ်ချိန်
အကြားတစ်ဦး "Miao-Tse" ကသူ့ရဲ့ဖော်ပြခြင်း Stielers လက်-Atlas, 1891 ကနေအသေးစိတ်, Guiyang နှင့် Guilin
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုအရတရုတ်နိုင်ငံ၌ Miao အရေအတွက်သည် ၉.၆ သန်းခန့်ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ တရုတ်ပြည်ပြင်ပရှိ Miao အဖွဲ့ခွဲ (သို့) မုန်းလူမျိုးများသည် ၁၈ ရာစုမှ စတင်၍ ပြည်ပသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းကြောင့် ထိုင်း ၊ လာအို ၊ ဗီယက်နမ် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တို့တွင် နေထိုင်ကြသည်။ ၁၉၄၉ မှ ၇၅ အတွင်း အင်ဒိုချိုင်းနား နှင့် ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲများ အပြီးတွင်ပြောင်းရွှေ့အခြေချမှုကြောင့်ယခုအခါမုံလူမျိုးများသည် အမေရိကန် ၊ ပြင်သစ်ဂီယာနာ ၊ ပြင်သစ် နှင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံများတွင် နေထိုင်ကြသည်။ စုစုပေါင်း Miao ဘာသာစကားမိသားစုတွင်ပြောဆိုသူ ၁၀ သန်းခန့်ရှိသည်။ ဤဘာသာစကားမိသားစုသည်ဘာသာစကား (၆) မျိုးနှင့်စကား (၃၅) မျိုး (အချို့ကိုနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်နားလည်နိုင်သော) ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဟောင် - မီယန် (Miao-Yao) ဘာသာစကားမိသားစု၏ဟောင်ကောင် / မီအိုဌာနခွဲ တွင် ပါဝင်သည်။
မုံလူမျိုးအများစုသည်ထိုင်း၊ လာအို ၊ ဗီယက်နမ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ ၀ င်အရှေ့တောင်အာရှ၏မြောက်ပိုင်းတောင်တန်းဒေသများသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။ သို့သော်များစွာသောသူတို့သည်တရုတ်ပြည်အနောက်တောင်ပိုင်းဝေးလံသောဒေသများ၌အများအားဖြင့် ယူနန်ပြည်နယ် ၊ ဂွမ်စီပြည်နယ်များ နှင့် Guizhou တွင်အနည်းငယ်သာနေထိုင်ကြသည်။
မှတ်ချက် - စီချွမ်ပြည်နယ်၏ Miao ဒေသများသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်အသစ်တည်ထောင်ထားသော Chongqing မြူနီစီပယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
မြောင်အများစုသည်တရုတ်ပြည်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ တရုတ်ပြည်တွင်လူ ဦး ရေတိုးပွားလာ
တရုတ်မြောင်လူဦးရေ၏ ထက်ဝက်ခန့် မြောင်
iao ၃,သန်း၀၀၀၀၀ သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် Guizhou တွင်ဖြ ကွေ့ကျိုးမြောင် နှင့်ပြည်နယ် ၆ ချိုးမုမှလူများသည်မြောင်လူဦးရေစုစုရေားလုံး၏ ၉၈% ကျော်ရှိသည်။
ဟူနန် : 1,550,000
ယူနန်ပြည်နယ် : ၈၉၀,၀၀၀
စီချွမ် - ၅၃၀,၀၀၀
Guangxi : ၄၂၀,၀၀၀
ဟူဘေး - 200,000
ဟိုင်နန် - ၅၀,၀၀၀ (Miao ဟုခေါ်သည်။ သို့သော် ယာအို နှင့် လီ လူမျိုးများဖြစ်သည်)
အထက်ပါပြည်နယ်များတွင်မီအို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု (၆) ခုရှိသည်။
ချန်သုင့်နန်မြောင်နှင့် ဒုင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု ၊ ကွေ့ကျိုးပြည်နယ်
ချန်နန် ပုယီးနှင့် မြောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု ၊ ကွေ့ကျိုးပြည်နယ်
ချန်ရှီနန် ပုယီနှင့် မြောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု၊ ကွေ့ကျိုးပြည်နယ်
Xiangxi Tujia နှင့် Miao ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု ၊ Hunan
Wenshan Zhuang နှင့် Miao ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု ၊ ယူနန်
Enshi Tujia နှင့် Miao ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု ၊ Hubei
တရုတ်ဒဏ္ဍာရီအရ ချီယိုအု ဦး ဆောင်သော ကျူလီ အနွယ်မှဆင်းသက်လာသည့် Miao ( Chinese မှာရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြ Zhuolu ၏တိုက်ပွဲ 涿鹿 စီရင်စု များ၏လက်ရှိပြည်နယ်နယ်စပ်အပေါ် Hebei နှင့် လြောငျး နှင့်ယန် Di, Huang က Di 黃帝 Huaxia ( 華夏 ) အနွယ်နှစ်မျိုးလုံးသည် မြစ်ဝါ ချိုင့်ဝှမ်း၏ကြီးစိုးမှုအတွက်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။
ဟူနန် ပြည်နယ်ရှိ Changsha အနီးရှိပိုးပုံပေါ်တွင် Western Han ပန်းချီကားတစ်ချပ်
အဆိုပါကာလအတွင်း သူ Ming နှင့် Qing မင်းဆက် (1368 – 1911) '' Miao 'နဲ့' လူကို '' နှစ်ဦးစလုံးသတ်မှတ်ပေးရန်ဖြစ်နိုင်သည်, ဒုတိယအသုံးပြုခဲ့ကြသည် Yao အဘိဓာန် 傜 ကလူ။ ယွမ်၊ မင်နှင့်ကွင်မင်းဆက်များသည်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်သကဲ့သို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
Miao ပုန်ကန်မှု အတွင်း Miao မျိုးနွယ်စုများပုန်ကန်သောအခါဟန်တရုတ်၊ ဟွေလူမျိုးများ အပါအ ၀ င်မင်တပ်ဖွဲ့များသည်သူပုန်များကိုချေမှုန်း။ ထောင်နှင့်ချီသောသူတို့ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။   Miao ယောက်ျားလေးများကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 
၁၇၉၅ ခုနှစ်၊ ဟူနန်ရှိ Miao အားအစိုးရမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုသရုပ်ဖော်သည့် Qing ခေတ် ပန်းချီကားတစ်ချပ် ။
ယင်းအခါ Tunbao လူတွေခြေရာတွေရဲ့မူလအစဟာမင်မင်းဆက်မှ back Hongwu ဧကရာဇ် Yao အဘိဓာန်များနှင့် Miao အမျိုးသမီးများကိုလက်ထပ်လူတို့သညျအခြို့နဲ့အတူယူနန်အောင်နိုင်မှ 1381 ခုနှစ်တွင် 300,000 ဟန်တရုတ်အထီးစစ်သားများစေလွှတ်ခဲ့သည်။
မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများတွင် ဦး ဆောင်သောအမျိုးသမီးများရှိနေခြင်းသည်အရှေ့တောင်အာရှလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု၏အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာ - ၁၆၆၇ ခုနှစ်တွင်ယူနန်မှ Miao အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်တရုတ်အရာရှိနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။  ယူနီနန်တွင် Miao အကြီးအကဲ၏သမီးသည် ၁၆၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသူသည်တရုတ်စကားနှင့်ရေးတတ်၊ နားထောင်နိုင်၊ 
ကွေ့ကျိုးပြည်နယ်ရှိ မြောင်လူမျိုးအများစုနေထိုင်သည့် ရှီကျန်းမြို့နယ်
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကတရုတ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှု ကို တရုတ်ပြည်မကြီးတွင် ၈,၉၄၀,၁၁၆ မြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
တရုတ်ပြည်မကြီးရှိ မြောင်လူမျိုး၏ပြည်နယ်အလိုက် နေထိုင်တည်ရှိမှုပြဇယား
</br> မီအိုလူ ဦး ရေ
Guizhou ပြည်နယ် ၄၈.၁၀% ၁၂.၁၉၉%
ဟူနန် ပြည်နယ် ၂၁.၄၉% ၃.၀၃၇%
ယူနန်ပြည်နယ် ၁၁.၆၇% ၂.၄၆၃%
ချုံကင်း မြူနီစီပယ် ၅.၆၂% ၁.၆၄၇%
Guangxi Zhuang ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၅.၁၈% ၁.၀၅၆%
ဟူဘေး ပြည်နယ် ၂.၄% ၀.၃၆၀%
စီချွမ် ပြည်နယ် ၁.၆၅% 0.179%
ဂွမ်ဒေါင်း ပြည်နယ် ၁.၃၅% 0,142%
ဟိုင်နန် ပြည်နယ် ၀.၆၉% ၀.၈၁၀%
အခြားသူများ 1.85% N / A
ဖိုင်:Miao Women Dancing Guizhou.jpg
Guizhou တွင်ရိုးရာအကအဖွဲ့ဖြင့်ဖျော်ဖြေသော Miao မျိုးနွယ်မှအမျိုးသမီးငယ်များ
Guizhou မှ Miao မိန်းကလေးများသည်ရိုးရာငွေလက်ဝတ်ရတနာဝတ်ဆင်ကြသည်
မြောင်ငါးသည်ရေနွေးငွေ့ (သို့) ငါးများအားစုံလင်စေရန်ပြုလုပ်သောအထူးပန်းကန်ဖြစ်သည်။ ၄ င်းကိုအရသာထူးခြားသည့်အရသာရှိသည့်ဒေသန္တရအစားအစာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ငါးများ၊ လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ စိမ်းလန်းသောငရုတ်ကောင်း၊ ဂျင်းအချပ်နှင့်ကြက်သွန်ဖြူတို့ကလူတို့အားအစားအစာအတွေ့အကြုံများစွာပေးသည်။ 
မုံ - မျန် ဘာသာစကားများ
↑ Elizabeth M. Hoeffel, Sonya Rastogi, Myoung Ouk Kim, Hasan Shaid.(2010) The Asian Population: 2010. 2010 Census Briefs.
↑ "The countries of birth and ethnicities of Australia's Hmong and Lao communities: an analysis of recent Australian census data" (30 March 2010). Journal of Lao Studies: 55–85. Retrieved on 16 July 2017.
↑ Tapp, Nicholas. "Cultural Accommodations in Southwest China: the 'Han Miao' and Problems in the Ethnography of the Hmong." Asian Folklore Studies, Vol. 61, 2002: 77-104.
↑ Yang၊ Kou (2010)။ Commentary: Challenges and Complexity in the Re-Construction of Hmong History (in en)။
↑ Chih-yu Shih (2002)။ Negotiating ethnicity in China: citizenship asaresponse to the state။ Psychology Press။ p. 133။ ISBN 0415283728။ 2010-06-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Frederick W. Mote (1988)။ The Cambridge history of China: The Ming dynasty, 1368-1644, Part 1။ Cambridge University Presslocation=။ p. 380။ ISBN 0521243327။ 2010-06-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Shih-shan Henry Tsai (1996)။ The eunuchs in the Ming dynasty။ SUNY Press။ p. 16။ ISBN 0791426874။ 2010-06-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Barbara Watson Andaya။ The Flaming Womb: Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia။
↑ 舌尖上的中国：正宗苗家古法腌鱼，可保存上10年不变质 (in zh)။
Tomoko Torimaru (စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈)၊ အပ်တစ်ချောင်း၊ Thread တစ်ခု - Miao (Hmong) ပန်းထိုးခြင်းနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ Guizhou မှဟာဝိုင်ယီအနုပညာဂယ်လီမှအထည်အပိုင်းအစများ
Ch'ien Lung (emperor of China) (1810)။ The conquest of the Miao-tse, an imperial poem ... entitled A choral song of harmony for the first part of the Spring [tr.] by S. Weston, from the Chinese။ London: Printed & Sold by C. & R. Baldwin, New Bridge Street, Black Friars။ 24 April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ CS1 maint: ref=harv (link)
မုံလေ့လာရေးအင်တာနက်အရင်းအမြစ်စင်တာ Archived 18 May 2013 at the Wayback Machine.
HmongNet.org Archived 17 April 2012 at the Wayback Machine.
1786 မှ Miao လူနည်းစု၏အယ်လ်ဘမ်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြောင်လူမျိုး&oldid=727424" မှ ရယူရန်
၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။